Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neentlanzi zobugqwirha | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha intlanzi yomthakathi ekubonakala kwayo kungaqhelekanga kakhulu. Baswele umhlathi kwaye bayafana nee-eels. Ziyaziwa ngegama lehagfish. Igama layo lenzululwazi ngu UMyini kwaye ungowosapho lwe-myxinidae.
Ukuba ufuna ukufunda yonke into malunga neentlanzi zobugqwirha, funda kwaye ufumane iimfihlo zayo.
1 Iimpawu zentlanzi yobugqwirha
4 Igqwirha yentlanzi
5 Ulusu kunye nokwakheka
6 Ingozi ngehagfish
Iimpawu zentlanzi yobugqwirha
Le ntlanzi inomdla inesikhumba esivelileyo kwaye inamadlala amnyama kulusu lwayo. Amathambo ayo enziwe ngentsholongwane. Ziyaziwa njengeentlanzi zobugqwirha kwaye zihlelwa kwi-agnate.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, abanamhlathi kwaye banempumlo enye kuphela. Zikhula elwandle kwaye, ke ngoko, abanamehlo akhule kakhulu. Ngokungabi nombono ocacileyo wendalo, unobunzima bokuchonga amaxhoba akhe.
Uninzi lweentlanzi zobugqwirha ziphelile ngenxa yokuzivelela okuncinci. Intlanzi engenemihlathi kunye nombono oyinika ulwazi oluncinci malunga nendalo esingqongileyo kuyo kunzima ukuzingela.
Ngaphakathi kwee-agnathan kukho kuphela izibane kunye ne-hagfish. IiLampreys zondla kwigazi lezinye iintlanzi, ngelixa i-hagfish itya kwizidumbu okanye iintlanzi ezifa. Zombini ezi ntlobo azinemihlathi, nto leyo eyenza kubenzima ukondla.
Zithathwa njengenye yeentlanzi zakudala ezikhoyo, yiyo loo nto ziphantsi kokuphela okusondeleyo. Nangona zizilwanyana ezingaphuhliswanga kakuhle, zizinto eziyimfuneko kwi-ecology yeenkqubo zaselwandle. Indima yakho kwi Iinkqubo zaselwandle "kukurisayikilisha" izinto eziphilayo. Kwaye kuba zininzi kakhulu ezi zilwanyana eziselwandle kwaye zitya izidumbu, ziphinda zivuselele ukubola kwezinto eziphilayo kunye nokucoca ulwandle kancinci.
Ukugqwesa ngokubalaseleyo, zizinto ezinamathuba angcolileyo kuba zitya izidumbu ezisendleleni yazo. Zonke izidumbu zaselwandle kunye nezinto ezilahliweyo kwindawo zokuloba kukutya okulungele iintlanzi zobugqwirha. Nangona kunjalo, kuba ubuninzi bezi zilwanyana zigxile kulwandle, akunakwenzeka ukuba zonke zitye kuphela izidumbu. Olunye uphononongo kwezi hagfish luye lwavavanya umxholo wesisu wezinye iihagfish ezithinjiweyo kunye nezinye ezingenamqolo, i-shrimp kunye neempethu zepolychaete.
Nangona kukho ulwazi malunga nolu hlobo lunokwenzeka lokondla, khange kwenzeke ukubonwa ngokuthe ngqo ukuba zixhaphaza njani kolu hlobo lweentlobo.
Into eyaziwayo ngokondliwa kwale ntlanzi kukuba ibamba intlanzi efileyo okanye efayo kunye nolwimi lwayo iyakwazi ukungena ngaphakathi emzimbeni ukuyitya ngaphakathi. Xa iintlanzi zisifa, zithatha ithuba lokutya izibilini zazo ngelixa zisaphila. Ezi ntlanzi ziyakwazi ukutya ukuya kumaxesha aliqela ubunzima bazo ngexesha elifutshane.
I -fishfish ihlala phantse kuzo zonke iilwandle, ukuba amaqondo obushushu aphakathi. Eyona ntlanzi idumileyo yehagfish ihlala kuLwandlekazi lweAtlantic kwaye ifikelela kwisiqingatha semitha ubude. Itya ezinye iintlanzi ezifa neziswelekayo, ukongeza kwezo sele ziswelekile. Yayo, Ubahlaba ngolwimi oluqinileyo namazinyo utye inyama nesibindi.
Olunye lweempawu ezenza ukuba esi silwanyana sikhetheke kwaye sahluke ngokukodwa sisilayidi sayo esidumileyo. Le into gelatinous egubungela iintlanzi kwaye ikhuphe izixa ezikhulu xa iziva icinezelekile. Ukucekiseka kwale slime kunesizathu: ukuzikhusela kwayo. Esi silayidi sisetyenziswa zezi ntlanzi ukuzikhusela kwizilwanyana ezizama ukuzizingela.
Xa iintlanzi ziziva zisondela kulusu lwazo, ibangela ukuba iigill zakho zivalwe yimifinya. Khange kwenzeke ukubonakalisa ukuba isilayidi sinetyhefu, nangona kukholelwa ukuba injalo. Ukwakhiwa kwale slime ubukhulu becala ngamanzi, iiamino acid, ezinye ii-osmolyte kunye nemisonto yeeproteni.
Enkosi ngomzimba wayo ocolekileyo, inokudlula kwiindawo ezimxinwa kakhulu ukuzikhusela kwaye ibaleke kookrebe. Ukongeza, ukuba bathe batya irhamncwa labo, iigill ziya kugutyungelwa yile slime ngendlela enokuthi ibaphalaze bengonzakalanga kwaye baya kuba nako ukubaleka.
Ulusu kunye nokwakheka
Ngaphantsi kwesikhumba se -fishfish kukho umngxunya ogcwele ligazi kwaye unendawo enkulu ekhoyo. Kucingelwa ukuba ngale ndawo, ihagfish inokunyusa inani lesilayidi abasenzayo ukuya kuthi ga kwi-35% ngaphambi kokuba igcwaliswe ngokupheleleyo. Ukuqinisekisa oku, kwenziwa isifundo apho balingisa ukulunywa kookrebe ngomatshini kufana ne-guillotine enamazinyo okrebe. Xa oku kusenzeka, ulusu lwalusonga ujikeleze izinyo, lunika amanye amalungu indawo eninzi yokuphuma kwingozi. Nangona kunjalo, xa ulusu olufanayo lwaludityaniswe ngokuthe ngqo kwimisipha yentlanzi efileyo ukuyondla, izinyo laligqobhoza ngokulula.
IHagfish inokwenza amaqhina ngemizimba yayo ngenxa yesikhumba sayo esivulekileyo, esingenanto. Oku kubenza babuyekeze ukungabikho kwemihlathi yabo njengoko, ngokujija kwiqhina, banakho ukukrazula inyama kwizidumbu ezibolileyo kunye nokuzondla.
Ityala elingenakulibaleka yingozi eyenzeka kuhola wendlela wase-Oregon apho itrakhi yaphaphama yaza yaphethuka, inetanki ngaphakathi. ngaphezulu kweetoni ezintathu zehagfish ebhodini. Xa yonke imixholo yetanki ichithele endleleni, ihagfish, ixinekile, isasaza isilima sayo esidumileyo kuyo yonke indawo. Xa isilayidi ixutywe namanzi, yajika yonke i-asphalt yaba yiternern yentsimbi.
I-slime inzima kakhulu kwaye kunzima ukuyisusa kwimpahla, kangangokuba iingcali zicebisa ukuba zilahle ngokuthe ngqo iimpahla. Ukucoca indlela, kwakufuneka oomatshini abanzima ukususa ityhubhu.
Njengoko ubona, intlanzi yobugqwirha yenye yezona zinqabileyo kunye nezona zakudala ehlabathini kwaye isilima sayo sifundwa nzulu, kuba isenokuba yi-lycra yekamva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zamagqwirha